Mbappe “Haddii aan aniga ahaan lahaa, waan joogi lahaa Real Madrid.” | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Mbappe “Haddii aan aniga ahaan lahaa, waan joogi lahaa Real Madrid.”
Mbappe “Haddii aan aniga ahaan lahaa, waan joogi lahaa Real Madrid.”
Posted by: Mahad Mohamed February 2, 2019
Himilo FM –20 jirkan ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan kubadda cagta tan iyo markii uu ku biiray AS Monaco.
Saxiixiisa kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku garaacday Real Madrid tartanka loogu jiray saxiixiisa 2017. Markii hore waxa uu ugu biiray amaah hal xilli ciyaareed ah kahor inta uusan si joogta ah ugu biirin lacag dhan £ 166 Milyan.
Intii uu ku sugnaa Monaco sannadkii 2013, weeraryahanka iyo qoyskiisa ayaa booqday Santiago Bernabeu iyo Valdebebas oo ku yaalla magaalada Madrid. Waxa uu sidoo kale la kulmay Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane iyo Carlo Ancelotti oo ahaa tababaraha wakhtigaasi ee kooxda.
Fikradda ka danbeysa booqashadu waxay ahayd in uu dareemo aragtida Madrid , waxay sidoo kale aheyd meel uu u dhaqaaqi karo si uu u horumariyo xirfadiisa.
Waxaa jiray dalab ka yimid kooxda La Liga ka dhisan oo isku dayday inay ku qanciyaan imaanshiyaha naadiga laakiin qoyska Mbappe ayaa doonayay in uu ku sii nagaado Paris oo ay reerkiisu degan yihiin.
Sida ay ku warameyo majaladda AS, markii uu booqday Bernabeu sannadkii hore wareega 16-ka Champions League, Mbappe ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqaaqi doono Real Madrid.
Warbixinta ayaa sheegeysa in agagaarka qolka labiska ciyaarta kaddib, ku guuleystaha koobka adduunka ayaa la hadlay Isidro Diaz kaasi oo u soo ciyaaray Real Madrid. Ciyaaryahanka reer Spain ayaa ku yiri Mbappe “waa in aad timaado Madrid.”
Mbappe ayaa dhoola caddeeyay kahor inta uusan jawaab ka bixin: “Haddii ay aniga ahaan laheyd, durbadiiba waan joogi lahaa halkaasi.” Laacibkaan ayaa rajeynaya in mar un uu halkaasi uu caga dhigto, waxaana uu mar walba ku riyoodaa in uu u ciyaaro Los Blancos.
Mbappe ayaa 18 gool ka dhaliyay Ligue 1 xilli ciyaareedkan, mana jiro cid isaga ka badan.
Previous: Ingiriiska: Dilaaga aamusan oo khatar ku haya nolosha 21 Milyan oo qofood
Next: 10 jir wacay booliiska Indiana si looga caawiyo layli waxbarasho!